Vashandi veApple vachadzokera kuhofisi munaGunyana | Ndinobva mac
Vashandi veApple vachadzokera kuhofisi munaGunyana
Tim Cook akatumira tsamba yeruzivo nezuro kuvashandi vake vese achivaudza kuti avo vachiri kufonera kubva kumba vachadzokera kuhofisi muna gunyana. Mazuva matatu pavhiki. Nhau huru, pasina kupokana.
Nhau huru nekuti izvo zvinoreva kuti isu tiri pakupedzisira kukunda muhondo pamwe nevanofara Covidien-19. United States yanga iri imwe yenyika dzakasimukira dzakanyanya kubatwa nedenda iri, asi yanga iriwo imwe yekutanga kubaya nhomba yakawanda yevagari vayo. Apple pachayo iri kubaya vashandi vayo, uye izvi zvinoita kuti ikwanise kuzivisa "kudzokera kuhofisi" nhasi.
vava kuda achangotumira izvo Tim Cook nezuro akatumira memorandamu kuvashandi vake, uko akatsanangura, pakati pezvimwe zvinhu, kuti avo vari kuita parunhare kubva kumba, vachadzokera kuhofisi munaGunyana, mazuva matatu pasvondo.
Kunyangwe zvese izvo zvatakakwanisa kuita nepo vazhinji vedu tanga takaparadzaniswa, chokwadi ndechekuti chimwe chinhu chakakosha kubva mugore rapfuura chave kushayikwa: mumwe nemumwe. Vhidhiyo yekufona yakaderedza chinhambwe pakati pedu, pasina mubvunzo, asi pane zvinhu izvo zvisingakwanise kudzokorwa.
Nemeseji iyi CEO weApple akataura kuti atsanangure chikonzero chekudzokera kuhofisi. Iye anotenda kuti kunyangwe zvikafamba sei zvese nehurukuro yemavhidhiyo, havafi vakatsiva kusangana kwevanhu kumeso, kwakakosha mu Kubatana.
Vazhinji vashandi vachakumbirwa kuti vadzokere kumahofisi avo napakugara kwemwedzi, Chipiri y China, pamwe nesarudzo yekuterevhizheni neChitatu neChishanu. Mapoka anoda basa rekutarisana-neuso achadzokera kuhofisi mazuva mana kusvika mashanu pasvondo.
Nhau huru, pasina kupokana, nekuti ichi chisarudzo ndicho chimwe chiratidzo chekuti nekuda kwemajekiseni mufaro uyu urikukundwa Denda, (zvirinani mune dzimwe nyika) uye munguva pfupi tinodzokera kune zvakajairika zvinodiwa nevanhu vese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vashandi veApple vachadzokera kuhofisi munaGunyana
Ndiwe ani, Charlie Brown? Ichaburitswa muna Chikumi 25